China Silver ဆားကစ် (Silver paste line) ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ |Xinhui
ငွေငါးပိ ဆားကစ်ဖလင် (ငွေရောင်အခြေခံ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆားကစ်)
ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ- ဖလင်ပတ်လမ်း၊ ဖလင်ပတ်လမ်း၊ ငွေပတ်လမ်း၊ ငွေပတ်လမ်း၊ capacitive အာရုံခံပတ်လမ်း၊ ဖလင်အင်တင်နာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းစာရွက်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလျှပ်ကူးပစ္စည်းစာရွက်၊ ငွေပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆားကစ်၊ ငွေဖလင်ပတ်လမ်း၊ ကာဗွန်ငါးပိပတ်လမ်း၊ မြင့်မားသောခုခံမှုပတ်လမ်း။ကီးဘုတ်လိုင်း။ခလုတ်ပတ်လမ်း၊ ကီးဘုတ်ပတ်လမ်း။
Flexible Membrane ကီးဘုတ်သည် ပုံမှန်အမြှေးပါးကီးဘုတ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤအမြှေးပါးကီးဘုတ်အမျိုးအစားကို ၎င်း၏မျက်နှာဖုံးအလွှာ၊ အထီးကျန်အလွှာနှင့် ဆားကစ်အလွှာအားလုံးသည် မတူညီသောဂုဏ်သတ္တိရှိသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖလင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဟုခေါ်သည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အမြှေးပါးကီးဘုတ်၏ ဆားကစ်အလွှာသည် ခလုတ်ပတ်လမ်းပုံစံ၏ သယ်ဆောင်သူအဖြစ် ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသော polyester ဖလင် (PET) ကို အသုံးပြုထားသည်။Polyester ဖလင်၏ ဂုဏ်သတ္တိများ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဖလင်ကီးဘုတ်သည် ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကာ၊ အပူခံနိုင်မှု၊ ပျော့ပြောင်းမှု နှင့် ခံနိုင်ရည် မြင့်မားသည်။ခလုတ်ချိတ်ဆက်မှု နှင့် ၎င်း၏ ခဲဝါယာကြိုးများ အပါအဝင် switch circuit ၏ ဂရပ်ဖစ်များကို အပူချိန်နိမ့်သော အခြေအနေအောက်တွင် ကုသပေးသော ခုခံမှုနည်းသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသည်။ထို့ကြောင့်၊ အမြှေးပါးကီးဘုတ်တစ်ခုလုံး၏ဖွဲ့စည်းမှုမှာ ပျော့ပျောင်းမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိပြီး၊ ၎င်းသည် ပြားချပ်ချပ်ကိုယ်ထည်အတွက်သာမက ကွေးညွတ်သောကိုယ်ထည်နှင့်လည်း လိုက်ဖက်နိုင်သည်။ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အမြှေးပါးကီးဘုတ်၏ ခဲဝိုင်ယာကို ခလုတ်ကိုယ်ထည်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။group switch ၏ချိတ်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်သောအခါ၊ ၎င်းအား အမြှေးပါး၏နေရာတစ်ခုတွင်စုဝေးပြီး ဒီဇိုင်း၏သတ်မှတ်ထားသောအနေအထားနှင့်စံလိုင်းအကွာအဝေးအရ ပျော့ပျောင်းသော၊ မထင်သလိုကွေးညွှတ်နိုင်သောအလုံပိတ်ကြိုးအား အနောက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ စက်တစ်ခုလုံး၏ပတ်လမ်း။
1. Line switch လိုင်းခလုတ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အကန့်ကိုဖယ်ထားသော အမြှေးပါးခလုတ်ဖြစ်သည်။အချို့သောအချိန်အခါများတွင် သို့မဟုတ် ညွှန်ပြသည့်ဘောင်ရှိပြီးသားအသုံးပြုသူအချို့တွင်၊ ၎င်းတို့သည် ပြီးပြည့်စုံသော အမြှေးပါးခလုတ်ကို မလိုအပ်ဘဲ အောက်ခြေလိုင်းခလုတ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။.
2. Double-sided circuits နှစ်ထပ်ဆားကစ်များကို အမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်။အမျိုးအစားတစ်ခုကို နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဝါယာကြိုးများဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထားသည်။ဝိုင်ယာကြိုး၏ ချိတ်ဆက်မှုအဆုံးတွင် 0.5 မီလီမီတာခန့်ရှိသော အပေါက်ငယ်တစ်ခုကို ဖွင့်ထားပြီး ရှေ့မျက်နှာစာအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဤအပေါက်ထဲသို့ လောင်းထည့်သည်။လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအောင်မြင်ရန်၎င်းကိုပြောင်းပြန် circuit နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။အခြားဖွဲ့စည်းပုံမှာ အဓိကအားဖြင့် ရှေ့ပုံနှိပ်ဆားကစ်သည် X ဝင်ရိုးဦးတည်ချက်တွင်ရှိပြီး၊ နောက်ပတ်လမ်းသည် Y ဝင်ရိုးဦးတည်ချက်တွင်ရှိပြီး ဆားကစ်နှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိပေ။ဤဆားကစ်အမျိုးအစားကို e-books သို့မဟုတ် အခြားသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။အာရုံခံလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော အလားတူထုတ်ကုန်များ။
တံတားများပါရှိသော monolithic ဆားကစ်များအတွက်၊ ပတ်လမ်းနှစ်ခုကိုဖြတ်သည့်အခါ၊ UV insulating မှင်ကို ၎င်းတို့ကြားတွင် စခရင်ဖြင့် ရိုက်နှိပ်သင့်ပါသည်။ဤပရိုဂရမ်သည် စခရင်ပုံနှိပ်ခြင်းအရေအတွက်ကို တိုးစေမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ဒီဇိုင်နာသည် ဆားကစ်ကို ထပ်မံဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ မျဉ်းများကို ဖြတ်ကျော်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် ကြိုးစားသင့်သည်။
ယခင်- LED မီးလမ်းညွှန်ပန်းကန်